Ukuzaliswa kweentlanzi ze-betta | Ngeentlanzi
Abathandi be Intlanzi yeBetta o abalwi be-siam Bayazi ukuba ukuveliswa kwakhona kwale ntlobo yenye yezona zinto zinomdla kodwa kwangaxeshanye kunzima, kuba kufuna unyamezelo oluninzi, ixesha kunye nezixhobo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza Ukuzaliswa kwe-bettaKuxhomekeka kwinzala, ukuba ufuna ukuzama kwaye wandise ulwazi lwakho, kuya kufuneka ube nesibini sokuzalela i-bettas.
Ibhokisi yokuzalela iintlanzi ...
Iibhettas ezincinci zibangcono ekuveliseni kwakhona. Zombini, inkunzi nemazi, kufuneka zilingane ngokufanayo, ziqiniseke ukuba zingabazalisi kwaye zinemfuza elungileyo, ukuqinisekisa inzala elungileyo.
Ngaphambi kokuthenga abavelisi bokuvelisa kufuneka lungisa i-aquarium, ubuncinci iilitha ezingama-40 kunye nobushushu obuphakathi kwama-26 ukuya kuma-28 ° C kunye nendawo yokuhlala efanelekileyo kunye ne-ikhosistim, kunye nokucoca kakuhle kodwa oko akunangxolo kakhulu, apho siya kuba kunye, kodwa Yahlulwe yiglasi yekhusi, Esi sibini siya kubonana kodwa asizukunxibelelana ngokwasemzimbeni.
Ukudlala kulungele xa i-betta eyindoda inomdla emfazini, siyakuyiqonda kuba inkunzi izakuqala ukwakha indlwane yamaqamza phezu kwamanzi. Indoda yakha indlwane yebhamuza ngokuthatha umoya ngaphezulu kwaye iwuphose ngomlomo. Iqamza ngalinye elenziwe ngale ndlela ligutyungelwa yincindi encinci eyinika ukumelana kwelinye icala kunye nokuncamathela okuthile kwelinye, ukuze kugcinwe amaqanda kwindlwane.
POPETPOP Incubadora de...
Siza kuyisusa iglasi yekristale eyahlulahlula xa iyindoda xa sele yakhile indlwane yonke yamaqamza. Indoda iya kuqala ukuzala kunye nemazi enokuhlala iiyure. Xa sigqibile ukwahlula umntu obhinqileyo kwakhona. Kuba indoda iya kuba noxanduva lokuthatha amaqanda nganye ngomlomo wayo kwaye iwabeka kwi indlwane yamaqamza owakhileyo.
El I-betta eyindoda iya kuba yiyo ephethe ukufukama. Ixesha lokufukama kwamaqanda ziintsuku ezi-2 ukuya kwezi-4 kuxhomekeke kubushushu. Ngexesha lokufukama, ukuba kukho nawaphi na amaqanda akhutshwayo kwindlwane, inkuku iya kuwabeka ngenkuthalo kuwo, amaxesha ngamaxesha njengoko kufuneka.
Nje ukuba i-fry izalwe, inkunzi kufuneka isuswe ukuthintela ekutyeni amantshontsho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukuzaliswa kweentlanzi ze-betta
NDIQINISEKISA NJANI UKUBA NGUWUPHI UMNTU OWENZE IIMPAHLA EZILUNGILEYO?
UJaime Harris Soto sitsho
Molo, kumava am, abesilisa endibakhileyo indlwane yabo ngobukhulu obahlukeneyo, oko kukuthi, ezinye zibanzi kunezinye, kodwa ungatsho ukuba indlwane ilungile xa ubume bayo budibene kunye nomthamo kuba kukho amadoda enza izidleke ezincinci kubukhulu kodwa ngevolumu njengakwimiqolo eliqela
Phendula kuJaime Harris Soto
Molo, kumava am, abesilisa endibakhileyo indlwane yabo ngobukhulu obahlukeneyo, oko kukuthi, ezinye zibanzi kunezinye, kodwa ungatsho ukuba indlwane ilungile xa ubume bayo budibene kunye nomthamo kuba kukho amadoda enza izidleke ezincinci kubukhulu kodwa ngevolumu njengakwimiqolo eliqela.
UStephanie Blue sitsho
Andithandabuzi. Ndinamadoda amathathu kunye nemazi enye.
Wayesele eneentsana nenye yee-bettas
Umbuzo wam ngothi, ngaba unokuba nesibini kuphela okanye unokuba nenzala ngenye?
Phendula u-Azul Estefanía
Lisisiseko esisiseko, ulwazi ngokubanzi oluneziphene ezininzi kunempumelelo.
Kuqala sidinga ukulungiswa kweentlanzi ngaphambi kokuphinda zivelise, ukuze ungothusi ukuba amaqanda ayatyiwa, kuba mzuzu xa zibekwa kunye kufuneka ziyeke ukuzondla.
Ukuba abakulungelanga ukuya kwiintsuku ezi-6 bengatyanga, inkunzi iya kuwatya amaqanda okanye amantshontsho.
Molweni, ndinengxaki, bandinike intlanzi ye-beta ekhulelweyo kwaye asazi ukuba banike luphi unonophelo kuba khange basinike eyindoda, kungenziwa ntoni? Ndicela uphendule ngokukhawuleza kuba kubonakala ngathi sele eza kuzala ajike ngecala, lonto indenza uvalo